» मुखमा यस्ता खटिरा छन् भने क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ
मुखमा यस्ता खटिरा छन् भने क्यान्सरको संकेत हुन सक्छ
२३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०५:४३
पछिल्लो समयमा सबैभन्दा धेरैलाई लाग्ने रोगमध्ये क्यान्सर पहिलो नम्बरमा छ । नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै क्यान्सरको अवस्था उस्तै छ । हाम्रो अव्यवस्थित जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपिनका कारण क्यान्सरका बिरामी बढेका हुन् । क्यान्सर सरुवा रोग नभए पनि विश्वका धेरैजसो मानिस क्यान्सर रोगबाट ग्रसित छन् । खानपानमा ख्याल गर्ने हो भने क्यान्सर रोगबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ ।
कस्तो खानपान गर्ने ?
जंकफुड, र–फुड, केमिकल हालेको सागसब्जीका कारण पनि मुखको क्यान्सर हुन सक्छ । क्यान्सरबाट बच्न नुन कम हालेको खानेकुरा खानु उत्तम हुन्छ । बिहान–बेलुका खाना खाएपछि राम्रोसँग मुखको सफाइ गर्नुपर्छ । खाना खाएपछि कुल्ला गर्न बिर्सनु हुँदैन । सन्तुलित खाना, हरियो सागपात, फलफूल सेवनमा जोड दिनुपर्छ ।
मुखको क्यान्सरको प्रमुख कारण भनेको सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो । मद्यपान, सुपारीजन्य पदार्थ खानु, अखाद्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्नु हो । मुखको क्यान्सर भएका बिरामीमा ९० प्रतिशभन्दा बढी सुर्ती सेवनका कारण बिरामी हुने गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन छाड्ने हो भने मुखको क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ । मद्यपान पनि मुखको क्यान्सरको कारण हो । जुनसुकै प्रकार र मात्राको रक्सी सेवन गर्दा पनि मुखको क्यान्सर हुन सक्छ मद्यपान गर्दा सुर्तीजन्य पदार्थ धूम्रपानको पनि सेवन हुने गरेको प्रशस्तै भेटिन्छ । सुर्ती र रक्सी सँगै सेवन गर्दा मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना १५ गुणाले बढ्छ ।
कसरी पत्ता लगाउने ?
मुखमा आएका स–साना खटिरालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । मुखमा विभिन्न खालका दाग देखिन सक्छ । कहिलेकाहीँ घाउ नदुख्न सक्छ । यो क्यासरको संकेत पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा चिकित्सकलाई तत्कालै देखाउनुपर्छ ।
माधव नेपालले पाउँदै आएको शंकाको लाभको राजनीतिक स्थान समाप्त भयो : बाँस्कोटा
सुर्खेतबाट धरान जाँदै गरेको बस र टिप्पर ठोक्किँदा ५ जनाको मृत्यु